Somaliland.Org » Wararka Wargeyska OGAAL: Diblomaasiyiin iyo Ganacsadeyaal Faransiis ah oo ka xog-waramay ujeedada socdaal ay ku joogaan Hargeysa
Wararka Wargeyska OGAAL: Diblomaasiyiin iyo Ganacsadeyaal Faransiis ah oo ka xog-waramay ujeedada socdaal ay ku joogaan Hargeysa
January 31st, 2009 Comments Off Hargeysa (Ogaal) – Diblamaasiyiin iyo Ganacsadayaal Faransiis ah ayaa shalay Booqasho ku yimi dalka Somaliland, Islamarkaana waxa ay sheegeen in ujeedadooda socdaalkoodu la xidhiidho arrimo ganacsi iyo ka qayb-gelka bilowga Xafiis Baan BCIMA oo Faransiis ahi ka furaynayo Hargeysa.
Waftigan oo xalay wareysi gaar ah hotel Mansoor ku siiyay Wariyayaal ka socda Wargeysyada Ogaal iyo Haatuf, waxa ugu horeyn qeybaha waftigan iyo ujeedadooda faah-faahin ka bixiyay, Xoghayaha koobaad ee Safaaradda Faransiiska ee Djibouti Thierry Choinier oo horkacaya waftigan, waxana uu sheegay in wafti ahaan ay isugu jiraan Saraakiil ka kala socota wasaarada arrimaha dibada ee Faransiiska, Safaaradda dalkaasi ku leeyahay Djiboti iyo saraakiil mataleysa shirkaddo Ganacsi. Waxana uu sheegay in ujeedada ugu weyn ee ay Hargeysa u yimaadeen ay tahay ka dumlamaasiyiin ahaan inay dhiiri geliyaan xidhiidhka ganacsi ee Somaliland iyo Faransiiska. “Sidoo kale, waxa Beri (Maanta) imanaya Safiirka dawlada Faransiiska u fadhiya Kenya, Waxaanu kullan la yeelanaynaa Wasiirka arrimaha dibada Somaliland, waxa kale oo aanu tageynaa Dekada Berbera beri (Maanta), Axadana waxaanu ka qayb-gelaynaa xaflad loo sameynayo Furitaanka Xafiis Baan Faransiis ahi ka furanayo Hargeysa (BCIMA). Waxaanu ku faraxsanahay inaanu xidhiidh dhaqan dhaqaale la yeelano Somaliland.” Sidaas ayuu yidhi Xoghayuhu. Choinier, waxa uu sheegay oo kale inay kullamo la yeelanayaan Wasiirrada Maaliyada iyo Arrimaha Gudaha. “Tusaale ahaan, Waxa jira urur ay leeyihiin dadka reer Somaliland ee ku hadla Afka Faransiiska dadkana bara Luuqadan oo aanu taageero.” Sidaas ayuu yidhi Choinier oo aanu weydiinay ilaa hadda xidhiidhada ay la leeyihiin Somaliland iyo hadii uu jiro door ay ku leeyihiin geedi-socodka horumarinta addeegyada bulshada. waxana uu intaa ku daray isaga oo ka jawaabaya su’aal aanu ka weydiinay taageerada ay u geystaan Xafiiska Somaliland ku leedahay dalka Faransiiska. “Dawlada Somaliland ayaa leh awooda ay kaga furatay Xafiiska Paris (Farance), sababtoo ah, waxaanu aqoonsanahay waxa Somaliland u qabsoomay.” Thierry Choinier oo ka jawaabaya su’aal la xidhiidha qaababka dawladoodu u waajahdo budhcad badeeda oo inta badan xoog ah iyo cawaaqibka ka dhalan kara, waxa uu ku dooday in taas ay u suurtagelisay awooda mulatarigoodu. “Hawl-galada aanu ku qaadney Budhcad-badeedu waxay muujineysaa Awooda Ciidankayaga.” Ayuu yidhi. Thierry Caboche oo ah Wakiilka Wasaarada Arrimaha dibada ee Faransiiska u qaabilsan dalalka Geeska Afrika ee Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Somalia iyo Somaliland, ayaa ka waramay sidoo kale, xidhiidhka Somaliland iyo Faransiiska, “Sidaad ogtahay Faransiisku waxa uu horumarinayay xidhiidhka uu la leeyahay masuuliyiinta Somaliland, sidoo kale waxa Somaliland u jooga Paris wakiil. Anaguna sidoo kale, waxaanu xidhiidho kala soo sameynaa Somaliland safaaradayada Djibouti, waxa kale oo iyana jira hawl-galo kala duwan oo masuuliyiinta Somaliland ku yimaadeen Djibouti, si ay xidhiidho halkaa uga abuuraan. Taasina waxay ahayd 2007-dii, waxa iyaguna jiray safaro Safaaradayada Djibouti ku timi Somaliland si ay u horumariyaan xidhiidhada una bartaan hogaanka Somaliland. Islamarkaana u fahmaan arrimaha Gobol ahaan, laga soo bilaabo 2007 Faransiis ahaan waxaanu la lahayn Somaliland xidhiidho kooban, waxaanan u maleynayaa in aanu yaqiinsanay in xidhiidhadaasi ay ahaayeen kuwo muhiim ah, sababta oo ah marka ugu horeysa waxay calaamad u tahay dhiiri-gelin aanu ku siineynay si masuuliyiinta Somaliland ku sii taagnaadaan hanaankooda horumarineed iyo dimuqraadiyadeed.
Waxa kale oo xiise leh, in Faransiiska uu joogo oo uu xafiis ku leeyahay Paris, shaqsi (Fagadhe) matalaya oo wakiil u ah Somaliland, sidaa daraadeed, waxa uu fududeynayaa xidhiidhada ka dhexeeya Somaliland iyo Farance, taasina waa hawsha uu haatan ku jiro Ambassator Fagadhe.” Sidaas ayuu yidhi Thierry Caboche.
Sanadkii aynu ka soo gudubnay bishii september 2008, waxa jiray wafti Madaxweyne Rayaale hogaaminayay oo booqday dalka Faransiiska, waxana la is weydiin karaa saameynta socdaalkaasi yeeshay iyo inuu wax ka badaley arragtida siyaasadeed ee dawlada Faransiiska ku cabirto Somaliland. Sidaa daraadeed, Su’aal arrintaa la xidhiidha oo aanu weydiinay, wakiilka wasarada arrimaha dibada Faransiiska u qaabilsan Geeska Afrika Thierry Caboche waxa uu ku jawaabay. “Waxaan u maleynayaa, waxba ismey badelin ee weli waxaanu ku soconaa jihadayadii siyaasadeed ee aanu ku horumarineynay xidhiidhada ka dhexeeya masuuliyiinta dalkayaga iyo masuuliyiinta Somaliland, markaa wax is bedal ahi ma jirin. Laakiin, cadaymaa jira muujinaya in Somaliland ay u qalanto ku xisaabtan, islamarkaana si dhow ayaanu ulla soconaa arrimeheeda. Marka lagu darro horumarinta dhinaca dhaqaalahana, waa sababta ugu muhiimsan ee socdaalkayagani ku saleysan yahay taasoo ah isku xidhka dhaqaalaha. Waxaan u melaynayaa inay tahay markii koobaad ee aanu Somaliland la nimi talaabooyin horumar leh, taasoo aan filayo inay tahay muhiim.”sidaas ayuu yidhi.
Thierry waxa uu ka hadlay arrimaha budhcad badeeda oo uu sheegay in Faransiisku door muhiim ah ku leeyahay dedaalada lagaga hortegayo khatarta budhcadbadeedu ku hayso Gobolka iyo dunidaba. “Waxaanu bilownay hawl-geladan November 2007, ka dib markii Madaxweynaha Faransiisku soo dhigay in la ilaaliyo Maraakiibta u raran hayada WFP ee meel kasta oo ka mid ah Somaliya u sida cuntada, kuwaasoo khatar kala kulmayay budhcad badeeda, badhkoodna la afduubay. Sidaa daraadeed, marka ugu horeysa waxaanu bilownay inaanu gelbino Maraakiibta deeqda sida. Taasoo ay nagaga deydeen wadamada Denmark, Canada iyo Holand. Intaa ka dib-na waxaanu door muhiim ah ka ciyaarney dar-der gelinta qaraarkii Marykanku soo dhigey ee ahaa 18/16, si uu noo siiyo awood aanu ku fara-gelino biyaha gudaha Xuduudka Soomaaliya.”ayuu yidhi, sidoo kale, waxa uu sheegay in Faransiiska oo ah wakhtigan Madaxweynaha midowga Yurub uu door ka qaato hawl-galo uu sheegay in lagu ilaalinayo Gacanka Cadmeed. Isaga oo ka sii hadlaya arrimaha ka hortagista budhcad-badeeda waxa uu sheegay Wakiilku, in xidhiidh iskaashi ay kala leeyihiin Somaliland. Waxana uu intaa ku daray oo uu sheegay in dhinaca Argagixisada sidoo kale ay iska kaashadaan Somaliland iyo Faransiisku oo ay is dhaafsadaan macluumaadka. Waxana uu ku dooday in ay kaalin ka qaateen daweynta dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii Hargeysa ka dhacay 29/10, kuwaasoo la geeyay Djibouti. Thierry Caboche mar aanu wax ka weydiinay arrigtidooda doorashooyinka soo socda ee Somaliland iyo doorka ay ku leeyihiin waxa uu sheegay inay la socdeen qaabka diiwaan-gelintu uga dhaceysay Somaliland, “Waxaana aanu si aad u dhow ulla soconeynaa doorashada, Islamarkaana waxaanu aad ugu faraxsanahay oo aanu rajeynaynaa in doorashooyinkaasi ku dhacaan hanaan cadaaladeed iyo sida ugu dhaw ee dimuquraadiyadeed…ta aqoonsiga Somaliland, Faransiis ahaan iyo ka Midowga yurub ahaanba waxa aanu aaminsanahay inay arrintaasi u taalo Somaliland, masuuliyiinta koonfurta Soomaaliya iyo midowga Afrika, islamarkaana waa arrin ay tahay in ay wadamada Afrika iyo midowga Afrikaanku ku talaabsadaan ugu horeyn, dabadeedna ay la socodsiiyaan beesha caalamka waxa la yeelayo.” Madaxa waaxda ganacsiga ee safaarada Faransiiska Emmanuel BOROS, oo su’aalo door ah aanu ka weydiinay socdaalkooda Hargeysa, waxa uu sheegay in ay taageersan yihiin ka safaarad ahaan, hanaanka Baankan lagu furayo iyo ka shaqeyntiisuba in ay ka sii socoto Somaliland. “Sidoo kale, waxaanu halkan u nimi sidii aanu u heli lahayn macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan arrimaha ganacsiga iyo xaallada Somaliland, si aanu markaa ulla socodsiino macluumaadka ay Somaliland uga baahanyihiin shirkadaha Faransiiska ah ee xiiseyn kara inay Somaliland yimaadaan si ay u maalgashadaan… Haddii markaa ay wanaagsanaadaan macluumaadka aanu helaa, waxaanu rajaynaynaa in natiijooyin wanaagsani ka soo baxayaan.”
Boros waxa uu sheegay in arrimaha la xidhiidha ganacsiga Somaliland iyo Faransiiska, ka safaarad ahaan uu bilaabey Afar bilood uun ka hor welina ay cusub yihiin balse ay rajeynayaan in Guulo laga gaadho. “Haddana waxa illa socda laba shirkadood oo waaweyn, kuwaasoo mid ka mid ahi (Baanka) bilowday ganacsigeeda.” Ayuu raaciyay hadalkiisa. Hugues Haubois oo ah maamulaha shirkad ka shaqeysa addeegyada Dekadaha iyo madaarada (SDV, TRANSAMI) oo waftigan ka mid ah ayaa wariyayaasha u sheegay dhiniciisa in shirkadiisu indha-indhaynayso guud ahaan hawlaha ganasiga, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha dejinta iyo rarka Gaadiidka kala duwan ee bada, hawada iyo berigaba, taasoo uu sheegay inay ay kaga shaqeeyaan shirkad ahaan 88 wadan oo ku kala yaala caalamka oo dhan. “Imika xafiis noogama furna Somaliland. Laakiin, jaanis waanu u leenaahay inaanu xafiis ka sameysano. Waana taas, sababta aanu halkan u nimi.” Sidaas ayuu yidhi Hugues, Hugues oo ka jawaabaya su’aal laga weydiiyay in xukuumada Somaliland ay ka wada hadleen arrimo la xidhiidha hawlaha shirkadoodu qabato, waxa sheegay in socdaalkiisani uu yahay markii ugu horeysay ee ay Somaliland shirkad ahaan yimaadaan, sidaa daraadeedna ay wakhti ku qaadaneyso, islamarkaana ka dib marka ay ka laabtaan safarkoodan ay eegi doonaan baahiyaadka jira Somaliland ee ay shirkad ahaan buuxin karaan.
Waftigan Faransiiska ah oo ka kooban todobada Xubnood, shalay gelinkii horena ka soo degay Hargeysa, Islamarkaana ilaa Axada bari sii joogi doona, qaar ka mid ah oo u badan Saraakiisha masuulka ka ah Baanka laanta ka furanaya Hargeysa,